သနပ်ခါးမေ: Shopping ထွက်မယ်ဆိုရင်
By **~ မြတ်ကြည်~** 5:06 PM ဖက်ရှင်
ရှော့ပင်ထွက်ရင် ဘာဝတ်ရမယ်၊ ဘာမဝတ်ရဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေသ မရှိပေမယ့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် အဆင်ပြေပြေ ဝယ်နိုင်ခြမ်းနိုင်မယ့် အတိုအထွာလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အပေါ်ဖြစ်ဖြစ် အောက်ဖြစ်ဖြစ် အရောင်ဗြောင်လေးတွေကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါ။ ဒါမှ ကိုယ် ဘာအဝတ်၊ ဘာအဆင် pattern ပဲရွေးရွေး တွဲလို့ရမှာမဟုတ်လား?
ကြယ်သီးတပ် အင်္ကျီ ဝတ်သွားပါ။ ခေါင်းစွတ် အင်္ကျီနဲ့ဆို ချွတ်ရ၊ သွတ်ရတာ ပိုပင်ပန်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆံပင်လည်း ပွသေး။ ကျွန်မ အမြင်ပေါ့နော်။
ဂါဝန် ဝတ်မသွားပါနဲ့။ ဘာလို့ဆို ကိုယ်က အင်္ကျီ ဒါမှမဟုတ် ဘောင်းဘီ စမ်းဝတ်ပြီးရင် အပြင်ထွက်ပြီး လှမလှ တိုင်ပင်ဖို့ရာ ဂါဝန်ကြီးနဲ့ တွဲပြီး ထွက်လို့ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ။ တွဲရမယ့် ဘောင်းဘီ အင်္ကျီ လိုက်ရှာရတော့ အချိန်လင့်တာပေါ့။
ကြိုးပျောက် (strapless) ဘရာဇီယာ ဝတ်သွားပါ။ တခါတလေ ကိုယ်က စိတ်တွေ့ရင်တွေ့သလို ရင်လျား ဒါမှ မဟုတ် ကြိုးတစ်ချောင်း အင်္ကျီ၊ ဂါဝန်တွေကို ဝယ်ဖို့ ဝတ်ကြည့်တဲ့ အခါ၊ ဘရာကြိုးကြီး ပေါ်နေရင် နဂိုက လိုက်မယ့် အဝတ်တောင် ကြည့်ရလှချင်မှ လှပါလိမ့်မယ်။
Acessories တွေကို သိပ် ဦးစားမပေးပါနဲ့။ ဂျက်ကင်တထပ်ချွတ်ရပြန်၊ ပတ်ထားတဲ့ မာဖလာကြီး ဖယ်ရပြန်၊ ဆွဲကြိုးနဲ့ ငြိ။ ရှင်းရှင်းလေးပဲ ကောင်းပါတယ်။
ဆံပင်ကို စည်းထား၊ ကလစ် ထိုးထား ရင် အင်္ကျီ ဝတ်တိုင်း ဆံပင် ပြန်ပြင်ရမှာ မနိတ်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံးက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ချပြီးသွားပါ။
ရှူးဖိနပ်လေးတွေ ကတော့ ဘာအဝတ်အစားနဲ့ မဆိုလိုက်ပါတယ်။ စီးရတာလည်း သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ ဒေါက်နဲ့က လှတော့လှပေမယ့် စိတ်တိုင်းကျ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ကျတော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
အခုဆို အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့ ရှော့ပင်ထွက်လို့ရပြီပေါ့။ တခါတလေကျတော့လည်း ရန်ကုန် ရှော့ပင်စင်တာက အရောင်းစာရေးလေးတွေက သမန်ကာလျှံကာ ဝတ်သွားရင်၊ ဝယ်နိုင်လို့လားဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်ကြပြန်ရော။
အိုး ... ဒါနဲ့ ခြေထောက်ဆိုတာ ကြာကြာလျှောက်လေ ခြေဖဝါးအရွယ်ကြီးလေ ဖြစ်တာကြောင့်၊ ရှော့ပင်ထွက်လို့ ဝပြီး နောက်ဆုံးကျမှ ဖိနပ်ကို ဝယ်ပါလို့။ စစချင်းမှာ သွားဝယ်လိုက်ရင်၊ နောက် တကယ်လည်း တစ်နေကုန်ဝတ်တော့မှ ခြေထောက်ကကြီးလာ၊ ဖိနပ်ကကျပ်၊ ဖိနပ် ပေါက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
( ဘယ်ကဖတ်မိလည်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး :D)
နေ့တစ်နေ့ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေရှင်။
အင်ကြင်းသန့် February 19, 2012 at 5:43 PM
Sandakuu February 19, 2012 at 5:44 PM
အမကူးကတော့ ပြာကလောင်ပြာကချောင်စွပ်ကြယ်လို ဂါဝန်အရှည်ဝတ်သွားတာဘဲ.. အပေါ်ကနေလျှောချလိုက်တာ.. ဟီဟီးးးး
မှတ်သားသွားပါတယ်.. ခုလိုရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူး.. =)
Vista February 19, 2012 at 6:44 PM
ပိုင်သကွာ ရှော့ ပင်းဆရာမ ..
Candy February 19, 2012 at 6:50 PM
ရှော့ပင်ချင်နေတာနော် လူကိုရိုးတိုးရွတဖြစ်အောင်လုပ်တယ် အဟင့်
မဒမ်ကိုး February 19, 2012 at 7:37 PM
မေမြို့မိုး February 19, 2012 at 8:42 PM
အစ်မက တော်လိုက်ထှာ.. နာ့အစ်မလို့မပြောရဘူး..
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) February 19, 2012 at 8:52 PM
Anonymous February 20, 2012 at 12:21 AM
ဟုတ်တယ်နော် တခါတလေ လျော့ပင်ထွက်တဲ့အခါ
ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ဖိနပ်တို့ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်.
သေချာလေးမှတ်ထားလိုက်ပြီ ကျေးဇူး ညလေးမြတ်ကြည်း)
ဖြိုးဇာနည် February 20, 2012 at 1:53 AM
ကောင်ယေးဒွေ အတွက်ကျဒေါ့ ကောင်းကောင်း
အကြောပြထားဝူး အဟင့် နာဒို့ယဲ ရှော့ပင် ထွက်
ဝင်းမင်း February 20, 2012 at 6:59 AM
shopping ထွက်ရင်း changing room door မှာ ကပ်ထားတဲ့ အကျီ င်္လဲနည်းလေး ကတော့
blouse တို့dress တို့လဲရင် ခေါင်းက စွပ်ချတာ မဟုတ်ပဲ ခြေထောက်ကနေ ဆွဲတင်၊ ပြီးမှ တဆင့် အကျီ င်္လက်ထဲ လက်ထည့်ဘို့ပြထားတာ မြင်ဘူးတယ်။ ဟုတ်တယ် အဲဒါ ပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။
jasmine(တောင်ကြီး) February 20, 2012 at 8:14 AM
san htun February 20, 2012 at 6:58 PM
ဒီမှာများ ရှောပင်းမထွက်ရတာ ကြာပြီဖို့မေ့တောင်နေတာ..သတိပေးတာ ကျေးဇူး..
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) February 23, 2012 at 5:21 PM
ပန်းချီ February 23, 2012 at 7:30 PM
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ မျက်ကျိရေ..ဂါဝန်နဲ့ ရှော့ပင်းမိတုန်းက အဖြစ်ပြန်သတိရတယ်း)) ရှော့တောင်ပင်းချင်သွားပြီ။
ကိုရီးယားနှင့် ပလပ်စတစ် ဆာဂျူရီ
ဟိုမရောက်၊ ဒီမရောက် ပို့စ်
စိတ်ကူးနဲ့၂၀၁၀ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ပွဲတက်ဝတ်...
Peeling အိမ်မှာ လုပ်ကြမလား (Papaya Yogurt Brighten...
သူ့အတွက် ချစ်သူကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရာ (How to b...